Sida loo codsado loona isticmaalo | Ururka Horumarinta Dhaqanka ee Ota Ward
Si loo isticmaalo xarunta, "Uguisu Net Diiwaangelinta Isticmaalaha" ayaa loo baahan yahay.Faahfaahinta, eeg "Waa maxay Uguisu Net?".
Xarun kasta waxay ku aqbashaa codsiyada isticmaalka bakhtiyaanasiib.Xarumaha banaan bakhtiyaanasiibka ka dib, codsiyada guud waa la aqbali doonaa marka horeba-soo-noqoshada.
Bakhtiyaanasiibka / habka dalabku wuu kala duwan yahay waxayna kuxirantahay qolka aad isticmaasho.Faahfaahinta, fadlan eeg jadwalka ku saabsan sida loo isticmaalo qol kasta.
(* Muroba waa eray matalaya qol kasta oo xarun kulan ah, garoon baseball, garoon kubbadda cagta, iwm.)
Khidmadaha adeegsiga xarunta iyo khidmadaha adeegsiga xarunta, eeg bogga guud / qalabka xarunta ee qol kasta.
Intaas waxaa sii dheer, fadlan bixi khidmadda adeegsiga xarunta waqtiga codsiga la isticmaalayo, iyo khidmadda isticmaalka xarunta ee shilka ah ka hor intaadan qolka isticmaalin.
Hordhac Xarunta Ota Ward Plaza
Hordhaca Ota Ward / Aprico Hordhac
Hordhac Xarunta Daejeon Bunkanomori
Haddii ay adeegsadaan koox ka mid ah kooxaha shixnadaha ganacsiga ka hor tagga dhalinyarada, kooxda horumarinta dhalinyarada, koox dhalinyaro, ama koox naafo ah, oo ay munaasabadu tahay danta guud, khidmadda adeegsiga ee xarunta waa la dhimi doonaa ama laga dhaafi doonaa.
Haddii aad ka baxsan tahay waaxda, waxaa lagaa qaadayaa 20% dheeri ah oo ah kharashka xarunta ee aasaasiga ah.
(Marka laga hadlayo isticmaalka iibka badeecadaha, ma jiro wax dheeri ah oo loo isticmaalo isticmaalka waaxda ka baxsan)
Marka la iibinayo alaabta ujeedada macaashka, 50% ee khidmadda aasaasiga ah ayaa lagu dari doonaa.
Fadlan eeg liiska qiimaha xarun kasta kala-saaridda waqtiga isticmaalka.
Waqtiga isticmaalka waxaa ku jira waqtiga loo baahan yahay diyaarinta iyo nadiifinta.Rakibaadda iyo ka noqoshada qalabka maqalka iyo muuqaalka iyo qalabka ay qabtaan shaqaalaha madxafka ayaa sidoo kale la sameyn doonaa inta lagu jiro waqtiga isticmaalka.
Fadlan hubso inaad si adag ugu hogaansanaato dhamaadka waqtiga isticmaalka.
Haddii aad ka keento cunto, cabitaano, ubaxyo cusub, ama shandado dibedda ah, fadlan qaado oo dibadda u soo saar wakhtiga loo isticmaalo.
Xaaladaha soo socda, isticmaalka xarunta lama oggolaan karo.Intaas waxaa sii dheer, xitaa haddii aad horeyba u oggolaatay, waan joojin karnaa, xaddidi karnaa, ama joojin karnaa isticmaalka.
Markay jirto khatar waxyeelaysa nidaamka dawliga ah ama edeb iyo dhaqan wanaagsan.
Marka ay jirto khatar masiibo ka dhacda dhacdo isticmaasha maaddooyin khatar ah.
Marka ay jirto qatar dhaawac ama luminta xarunta ama qalabka gacan qabashada.
Marka xuquuqda isticmaalka la wareejiyo ama la kireeyo.
Markii la aqoonsado inay dan u tahay urur laga yaabo inuu ku kaco rabshad, jirdil, iwm.
Marka ujeeddada isticmaalka ama shuruudaha isticmaalka la jebiyo.
Markii xarunta la waayo musiibo ama duruufo kale awgood.
Marka dhibaato ka timaado maaraynta xarunta, sida marka aad cod sareysa.
* Gawaarida korontada lama isticmaali karo maxaa yeelay buuqa iyo gaaska qiiqa ayaa dhibaya xaafada.
Beddel iyo baajinta taariikhda isticmaalka
Haddii uu isbeddel ku yimaado taariikhda iyo waqtiga isticmaalka, qolka isticmaalka, iwm, waad beddeli kartaa nidaamka.Fadlan codso isbeddel ku yimaada muddada aqbalaadda dalabka ee ku xusan xarun kasta.Fadlan ka fogow dib-u-beddelka ama joojinta isticmaalka ka dib markaad beddesho taariikhda isticmaalka, iwm, maxaa yeelay waxay u horseedi kartaa dhib ku ah isticmaalayaasha kale.
* Isticmaal oggolaansho, rasiid, iyo shaabadda shaqsiyeed ee codsadaha (shaabadda nooca stamperka lama oggola) ayaa looga baahan yahay dalab.
* Codsiyada waxaa la aqbali doonaa oo keliya goobta aad ka isticmaali doontid.
Muddada aqbalida arjiga
Hool weyn / hool yar / qol bandhig Taariikhda isticmaalka
1 todobaad kahor
* Marka laga hadlayo qeybta 5-aad ee istuudiyaha muusikada, illaa 7:XNUMX pm ee maalinta Maalinta
Kahor isticmaalka waqtiga
Hoolka, qolka ujeeddooyinka badan, geeska bandhigga, bannaan furan Taariikhda isticmaalka
* Aroortii, marka la eego qaybta koowaad, illaa maalinta ka horreysa taariikhda isticmaalka Maalinta
Maareynta khidmadaha isticmaalka sababo la xiriira isbedelada ama baajinta
Xitaa haddii qabanqaabiyaha u joojiyo isticmaalka duruufahiisa / keeda awgood, khidmadda adeegsiga la bixiyay lama soo celin karo mabda 'ahaan.Si kastaba ha noqotee, haddii tirtirka la codsado oo la ansixiyo ka hor taariikhda isticmaalka ee cayiman, khidmadda isticmaalka xarunta ayaa loo soo celin doonaa sidan soo socota.
* Haddii khidmadda isticmaalka la beddelay ay ka badato khidmadda isticmaalka lacag bixinta isla markiiba, waxaa lagaa doonayaa inaad bixiso farqiga u dhexeeya.
* Haddii aad baajiso ka dib markaad beddesho taariikhda isticmaalka, qaddarka celinta ee khidmadda xarunta way ka duwanaan kartaa.
* Si loo soo celiyo khidmadda isticmaalka, warqad oggolaansho adeegsi ah, risiidh, iyo shaabadda shaqsiyadeed ee codsadaha (shaabadda nooca shaambadda lama oggola) ayaa loo baahan yahay.
Soo celin buuxda
Qolka labiska ee hoolka weyn
Ilaa 90 maalmood kahor Taariikhda isticmaalka
Ilaa 60 maalmood kahor Taariikhda isticmaalka
Ilaa 30 maalmood kahor
Marxaladda weyn oo keliya
Hoolka / qolka bandhiga yar
Ilaa 30 maalmood kahor Taariikhda isticmaalka
Ilaa 15 maalmood kahor
Qolka kulanka, qolka u eg Jabbaan, qolka shaaha, qolka tababarka
Jimicsiga / qolka farshaxanka / istuudiyaha muusikada
Ilaa 7 maalmood kahor Taariikhda isticmaalka
Ilaa 2 maalmood kahor
Hoolka / qolka badan
Qolka kulanka / aqoon isweydaarsiga hal abuurka ah
Qolka-japan-ka ah iyo istuudiyo kala duwan